တန်ဖိုးနည်းဖုန်းနဲ့ မန္တလေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » တန်ဖိုးနည်းဖုန်းနဲ့ မန္တလေး
Posted by မောင် ဆင်ကြီး on Jun 23, 2013 in Copy/Paste | 11 comments
နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးကတော့ တန်ဖိုးနည်းဖုန်း ငွေကျပ်(၁၅၀၀)တန် simကဒ် ဆိုပြီး ဒီနှစ် ဧပြီလမှာ စတင်ပြီးထုတ်ပေးမယ့်ဆိုပြီး ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ဖုန်းလိုင်းကဒ် ထုတ်ပေးမယ်လို့ ပြောတော့ ဖုန်းတွေတောင် မပေးရသေးဘူး။မန္တလေးမြို့က ဖုန်းအရောင်းဆိုင်တွေကို (၁၅၀၀)တန် sim card ထွက်လို့ရောင်းရင် ဘယ်လောက်ရမလဲ ဆိုပြီးတော့ နန်းတွင်းထဲက စစ်ဗိုလ်တွေလာလာမေးကြပါတယ်။သူတို့ကဘယ်လောက် နဲ့ကောက်မလဲလို့ လာမေးကြတယ်ဆိုတော့ များများ ရောင်းလုိ့ရအောင် သူတို့က တစ်ဦးကို ကဒ်ဘယ်လောက် ရမှာမုိ့လုို့လဲ…………….ခင်ဗျာ……
ဒါကလဲ ဖုန်းအရောင်းဆိုင်က ၀န်ထမ်းတချုို့ ပြောလို့သိရတာပါ။ရပ်ကွက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ပြည်သူလူထု တွေကတော့ မဲနှိုက်ပြီးတော့ ပေါက်တဲ့လူရမယ်တဲ့….ပထမအသုတ် sim cardထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ တန်းစီကြပါတယ်။လူအမျိုးမျိုး အချိန်အမျိုးမျိုး ပေါ့ တန်းစီကြရပါတယ်။တချို့က တန်းစီပြီးတော့ နေရာရောင်းစား ကြပြန်ရော… ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွေက ဆင်းကဒ်တွေ အကုန်လုံးမဲနှိုက်ပီး ပေးရဲ့လား ဆိုတာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိပဲ တိတိကျကျ မသိရပါဘူး……………..
(၁၅၀၀)ကျပ်တန် ဖုန်းကဒ်ကတော့ ပြည်သူတွေလက်ထဲ ရောက်လာပီး ပြင်ပပေါက်ဈေး အနေဖြင့် ပထမအသုတ်မှာ ၃၀၀၀၀၊၃၅၀၀၀၊၄၀၀၀၀ကျပ်တွေနဲ့ အရောင်းအ၀ယ် ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဖုန်းအရောင်းဆိုင် တချို့ကတော့ ငါးသောင်းကျပ် ခြောက်သောင်းကျပ် ၀န်းကျင်ရောင်းချကြပါတယ်။နံပါတ်လှရင် လှသလို ဈေးပိုသွားပါတယ်။နံပါတ်လှတယ် ဆိုတာကတော့ အပူးများရင်များသလို ဈေးပိုသွားတာကို ဆိုလိုတာပါ။ပထမအသုတ်မှာတင် နံပါတ်တော်တော်လှတာတွေ ၃၅၀၀၀၀ကျပ်(သုံးသိန်းခွဲကျပ်)၀န်းကျင်ထိ ရောက်သွားတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရဲ့ တန်ဖိုးနည်းဖုန်း(၁၅၀၀)ကျပ်တန် ကတော့ ပြည်သူတွေလက်ထဲ ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်း ရောက်သွားပါသလဲ ခင်ဗျာ??????????????????
ကျွန်တော် ထင်ပါတယ် လွန်ရောကျွံရော ၅၀% ကို တန်ဖိုးအတိုင်း ရမယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်……..
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီလိုလုပ်လုိ့ရတယ် ဆိုပြီးတော့ မသမာတဲ့ လူတချို့က မုန့်ဖိုး(လက်ဖက်ရည်ဖိုး)၅၀၀၀၊၁၀၀၀၀၊၂၀၀၀၀ကျပ် ပေးပြီး မဲနှိုက်စရာမလိုပဲ အော်တို ကဒ်ကိုရနိုင်ပါတယ်။ဒါကလဲ အကျင့်ပျက်ဝန်းထမ်း တချို့ရှိလို့ ဒီလိုဖြစ်ရတာပါ။ဒီကိစ္စကို ဖြေရှင်းလို့ ရတဲ့နည်းလမ်း မရှိတော့ဘူးလား ခင်ဗျာ?????????????
ကျွန်တော် ဒီစာကို ရေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ ဆင်းကဒ်သုံးကြိမ် ပေးပေမယ့်လဲ ထူးခြားမှုမရှိခဲ့လို့ပါ။သုံးကြိမ်မြောက်မှာတော့ စေတနာရှိလှလွန်းတဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးက ပြည်သူများအဆင်ပြေစေရန် အတွက် ဆင်းကဒ်အရေအတွက် ပိုတိုးပေးခဲ့ပါတယ်။သို့သော်ငြားလဲ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး တချို့က ဆင်းကဒ်တွေကို ပြည်သူလူထုလက်ထဲ အကုန်ချမပေးခဲပါဘူး ခင်ဗျာ…..ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ဆင်းကဒ်မဲ ပေါက်တဲ့သူတွေ ကျွန်တော်မှတ်ထားသလောက် ပြောရမယ်ဆိုရင် ဥပမာ ဆင်းကဒ်က ၁၄၀ပေးတယ်ဆိုကြပါစို့ မဲပေါက်သူ အရေအတွက်က အယောက်ကိုးဆယ်လောက်သာ ရှိတာ လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးတိုင်းကသာ ဒီလိုလုပ်ရပ်မျုိးတွေ လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် မနက်၈:၀၀ နာရီဝန်းကျင် ကတည်းက မွန်းလွဲ၂:၀၀နာရီထိ ပေါက်မဲနံပါတ် စောင့်ပြီး နားထောင်နေတဲ့ ပြည်သူလူထုတွေက ကိုယ်ထင်သလောက် မရကြဘူးပေါ့…….တန်ဖိုးနည်း(၁၅၀၀)ကျပ်တန် ဖုန်းကဒ်နဲ့ပက်သက်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိလို့ အများသိအောင် ရေးလိုက်ရခြင်းပါပဲ
ကြားရနာရတာလဲ စိတ်မကောင်းဇရာ ပါလားဗျာ……….
ကဲပါ နည်းနည်းသီးခံပီး စောင့်မျှော်လိုက်ကြပါစို့လားခင်ဗျားးးးးးးးးး
ဒါမျိုးတွေကို သီးခံတတ်ဖို့ ဟိုးးး အရင်ဂတည်းက ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းတွေမှာ
အခန်းဆက် ကိုးရီးယား ဇာပ်လမ်းတွေလွှင့်ပေးပြီး ပြည်သူတွေကို
ကျုပ်တော့ခုအင်တာနတ်သုံးနေတဲ့ ဆင်းကဒ် တစ်နေကမှ ၀ယ်လာတယ်….
ဘတ် ၅၀ ပေးရတယ် စွပ်ကျယ်တစ်ထည် ရခဲ့သေးတယ်…..(ထိုင်းဆင်းကဒ်ပြောတာပါ)
ဈေးထဲမှာ ၀န်ထမ်းသုံးလေးယောက်လောက် ဟွန်းတိုလေးနဲ့အော်ပီး အသည်းအသန်
လိုက်ရောင်းနေတာ….. ဒါဂ စဂါးမစပ် ၀င်ပွားလိုက်တာပါ………….
အို……… သည်းညည်းခံ သည်းညည်းခံ သီးခံပါလေ………..။ အဲဒိလိုသီးခံနေရတာက မွေးကတည်းကပဲ ခုမှအထူးအဆန်းလုပ်ပြီးပြောနေပြန်ပါပြီ
တန်ဖိုးနည်းဖုန်းတွေကို ခုတုံးလုပ်ပြီးလုပ်စားသွားကြတယ် … တကယ်အသုံးလိုလို့ တန်းစီတာထက် ၊ မှောင်ခိုဈေးကွက်ထဲ ပြန်သွင်းဖို့ တိုးနေတာများတယ် ။ မဲစနစ်ဆိုတာလည်း မှန်ကန်မှုမရှိပါဘူး ။
မမှန်မကန်မဲစနစ်မှာ ၊ ကံထူးသူအဖြစ် မဲပေါက်ခဲ့လျှင်တောင် ၊ လက်ထဲ ထားသုံးသူဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ် ၊ သောင်းဂဏန်းရတာနဲ့ ချက်ချင်းလဲပစ်လိုက်ကြတာပဲ ။ တချို့မိုဘိုင်းဆိုင်တွေမှာ 1500 ဖုန်းကိုရောင်းနေတာ 80000ထိ ပေါက်တာ မြင်ဖူးတယ် ၊ နံပါတ်တောင် ရွေးလို့ ရသေးတယ် ။
ဖင်မနိုင်ပဲ ပဲကြီးဟင်းစားတဲ့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ စေတနာကို အသိမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ရပ်ကွက်လူကြီးနဲ့ သူ့ဧ။် ပတ်သတ်ရာ ပတ်သတ်ကြောင်းတွေ ၊ အပျင်းပြေ ကလိစရာ ဖုန်းကိုယ်စီရကြတယ် ။ အခြေခံ လူတန်းစားတွေ အပိုအသုံးစရိတ်ရကြတယ် ။ ဖုန်းဆိုင်တွေ ၊ လုပ်စားစရာ ဈေးကွက်တစ်ခုရခဲ့တယ် ။
၁၅၀၀တန်ဖုန်းတွေ အမည်ပေါက်မဟုတ်လျှင် ကိုင်ဆောင်ခွင့်မရှိဆိုတာမျိုး လုပ်ထားလိုက်လျှင် ဘယ်လိုများနေပါလိမ့် … ။ သိပ်တော့မထူးလှဘူးထင်ပါရဲ့ .. ခွိခွိ … ။ အသုတ်လိုက် ခွဲပြီးချနေတာ … တန်းစီတိုးပြီး …. လုပ်စားလို့တော့ ကောင်းမှ ကောင်းဗြဲ … ။ တလကို ငါးခါလောက်ချမယ်ဆို … သများလဲ ရုံးမတက်ပဲ …သွားတိုးဦးမယ် .. ခစ်ခစ် …
အဲ့ဒီ ၁၅၀၀ တန် ဆင်းမ်ကဒ်တွေ
ရှိသမျှ ဆိုင်တွေမှာ တင်ပြီး ရောင်းခိုင်းလိုက် ပြီးရော …
ဝယ်ချင်တဲ့လူ ဆိုင်မှာ ၁၅၀၀ နဲ့သွားဝယ် …
ဘာမှ ပြနေစရာ မလိုဘူး …
ဒီစနစ်မျိုး ဘာလို့ မလုပ်ကြတာလဲ မသိဘူး …
(ဘယ်သိမလဲ မင်းက ဂဂျောင်ကိုးကွ)
လုပ်စား ခွင့် ပေး လိုက်တာ လို့ ပဲ
ရပ်ကွက်ရုံးကတဆင့် မြို့နယ်ရုံးကတဆင့် ဟိုးအရင်က သမ၀ယမဆိုင်ကတဆင့် အခုလို မဲဖောက်ပေးတာတို့ တန်းစီပေးတာတို့ဆိုရင် ဒီလိုပုံ ဒီလိုအချိုး ဒီလိုမှောင်ခိုလက်သိပ်ထိုး စနစ်ဆိုတာ ဖြစ်တည်နေစဲပါဘဲ၊ ဒါအခုမှသိတာဟုတ်ဘူးနော် ကျွန်တော်တို့ ဖြတ်သန်းကြီးပြင်း လာတဲ့တစ်လျောက်လုံး ခေတ်အဆက်ဆက်တွေ့ကြုံခဲ့ရတာ။ တိုင်းပြည် သမ္မတ လုပ်တဲ့သူနဲ့ အခြားဝန်ကြီးတွေလည်း ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာ မသိလို့ပါလို့ပြောရင် ကျွန်တော်တော့မယုံဘူးဗျာ။ သူတို့လည်း သိသိကြီးနဲ့ကို ဒီပုံစံဘဲလုပ်နေတာဆိုတော့ စဉ်စားသာကြည့်တော့ မောင်ဆင်ကြီးရေ၊
ပြောလည်းပြော ရေလေးလည်းသောက်ပါအုံးနော့။ မောမှာစိုးလို့ပါ။
ရန်ကုန်မှာဒီတခါဝေသံတောင်မကြားမိဘူး။ ရန်ကုန်မှာ တကဒ်ကို ၈၀၀၀၀ ထိပေါက်ပါတယ်။ အခုတော့ ထပ်ချပေးတော့ဘူးကြားပြန်ပီ။ ဘာတွေမှန်းလဲမသိဘူး။ ရန်ကုန်မှာတော့ နှစ်သိန်းဖုန်းတွေ အရောင်းအ၀ယ်ပြန်ဖြစ်နေတယ်။ ဘာမှလဲမထူးပါဘူး။ ကုလားကြီးနဲ့ အရာကြီးပါပဲ။ ဖုန်းပြသနာကတော့ ခုထိမရှင်းနိုင်သေးဘူး။ ပုကလိက မချပေးသမျှတော့ဒီလိုပဲဖြစ်နေအုံးမှာပဲ။
ကိုယ့်ရပိုင်ခွင့်ကိုကိုယ်ရောင်းစားတာ အခြေအနေအမျိးမျိးကြောင့်ုလို့ နားလည်ပါတယ်၊ရပ်ကွက်ရုးံက sim card့ အားလုံး ကိုမဲမနှိုက်ဘဲ လက်သိပ်ထိုးရောင်းတယ်ဆိုတာကတော့မဖြစ်သင့်ဘူး၊သေချာတယ်ဆိုရင် ထိထိရောက်ရောက်တိုင်ကြာသင့်ပါတယ်၊ဒါမှ နောက်မလုပ်ရဲမှာ
ငွေဖြည့်ကပ် ဝယ်ရင် လဲ ကံစမ်းမဲက ရ သေးးး
မျော်မ နေတော့ပါဝူးးး ၁၅၀၀ တန်ရယ့့်